गान्धीको सत्ता- विचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन १६, २०७६ चन्द्रकिशोर
‘नाथुराम गोडसेले त ठिकै गरे नि ?’ यसै साता काठमाडौंमा भेटिएका एक बुद्धिजीवीको जिज्ञासा थियो, ‘गान्धीवध किन ?’ पुस्तक पढ्नुभएको छ ? मैले विनम्र प्रतिप्रश्न गरेँ, ‘महात्मा गान्धीबारे सबै पढ्नुभएको छ ?’ उनले स्वीकार गरे, ‘त्यो त छैन ।’
महात्मा गान्धीका बारेमा गहिरो अध्ययन नगरिकन नै हतारमा टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ बढ्दैछ । उनी जन्मिएको देश भारत पनि यस्तो प्रवृत्तिबाट अछूतो छैन । ३० जनवरी १९४८ मा नाथुराम गोडसेले गान्धीमाथि गोली प्रहार गरी मारेका थिए । त्यहाँ पनि एउटा तप्का अहिले गोडसेको महिमामण्डन गर्न लागेका छन् । कतिपय यस्ता गर्नेहरू त्यहाँ निर्वाचितसमेत भएका छन् । तर गान्धीको आभामण्डल कम भएको छैन । गान्धीमाथि जति प्रहार हुँदै गएको छ, त्यति नै गान्धी गोरेटो फैलिँंदै गएको छ ।
यतिखेर विश्वभरि नै गान्धीको १५० औं जयन्ती मनाइँदैछ । गान्धीबारे भन्न थालिएको छ, उनको ८ दशकको जिन्दगी वास्तवमा कैयौं जिन्दगीहरूको सगोल इतिहास हो । उनको बाटो र विचारलाई संरक्षण गर्न कुनै राज्यसत्ताको आवश्यकता छैन । तर आधुनिक सत्ताका अभियन्तालाई आफूले बेहोर्नुपर्ने चुनौतीहरूसँग जुध्न गान्धी विचारको साथ चाहिएको छ । यसले नै गान्धीको प्रासंगिकतालाई प्रस्ट्याउँछ । गान्धीले राजनीतिक सङ्घर्षको साथै रचनात्मक गतिविधिलाई समानान्तर रूपमा बढाए । त्यसैले उनलाई २० औं शताब्दीको रूपान्तरणकारी राजनीतिक नेतामध्ये एक मानिन्छ । अमेरिकी भविष्यवादी लेखक एल्विन टफ्लरको किताब ‘फ्युचर शक’ले निकै हलचल मच्चाएको हो । त्यसपछि ‘थर्ड वेभ’मा एउटा अध्यायको नाम नै ‘गान्धी विद सेटेलाइट्स’ राखिएको छ । सादा जीवन, प्रकृतिसँग निकटता र मानवताका लागि गान्धीको शिक्षाले विश्वको ध्यानाकर्षण गरिराखेको छ ।
भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको साथै उनले छुवाछूत उन्मूलन, हिन्दु–मुस्लिम एकता, चर्खा र खादीको प्रसार, ग्राम स्वराज्यको परिकल्पना, आधारभूत शिक्षामाथि जोड, परम्परागत चिकित्सीय ज्ञानको उपयोग, बदलावका लागि अखबारको प्रयोग, आश्रममा सामूहिक बसोबास जस्ता काम गरे । यसैले गान्धीको जीवन र उनको काम निकै विस्तृत हुनपुग्यो । औपनिवेशिक शासनबाट भारत मुक्त भएपछि यिनलाई पत्रकारहरूले सोधेका थिए, ‘भारत विकासको मोडल के हुनेछ ?’ उनको जवाफ थियो, ‘भारतको प्रगति बेलायतीहरूको बाटो समाएर हुँदैन । भारत त्यही बाटोमा हिँंड्यो भने उसलाई पृथ्वीजस्तै कैयौं ग्रहको आवश्यकता पर्न सक्छ ।’ उनको संकेत कथित आधुनिक विकासका कमजोरीतिर थियो, जहाँ केही प्रतिशत मानिसका लागि प्रकृतिको चरम दोहन गरिन्छ । अहिले वातावरणमा आकस्मिक परिवर्तन, असन्तुलित मौसम, मानव सभ्यताको लागि चुनौती बन्दैछ ।
गान्धी पर्यावरणका मुखर हितैषी थिए । त्यसैले उनका प्रयोगहरूमा प्रकृतिसँग समीपता र सन्तुलित प्रयोगको कुरा गाँसिएको थियो । आज बिग्रँदो पर्यावरणले गान्धीलाई सम्झिन दबाब दिँदैछ । यस सन्दर्भमा अहिलेका राज्य व्यवस्थापकहरूलाई गान्धी सत्ताको ओत चाहिन्छ । गान्धीको सत्ता भनेको उनको खुला जीवनमा भए–गरिएका प्रयोग, अनुभवजन्य चिन्तन र उनले आफ्नै प्रयोगबाट देखाएको बाटो हो । गान्धीको सत्ता सत्य, अहिंसा र सहिष्णुता हो । गान्धीको सत्य र अहिंसाबारे निकै चर्चा चल्छ, तर उनको सहिष्णुताबारे त्यति उल्लेख हुँदैन । सहिष्णुता भनेको सहने सामर्थ्य, सतत साधना हो । गान्धीको शब्दकोशमा सहिष्णुताको मतलब कमजोरी भन्ने होइन । अहिंसक सेना निर्माणको अस्त्र हो, सहिष्णुता । उनी क्रियाशील रहेकै बेला कैयौं कोणबाट उनकै मुलुक भारतमा औपनिवेशिक सत्ताविरुद्ध हिंसक प्रतिरोधको अभ्यास र वकालत हुँदै थियो । तर गान्धी समाजमा अहिंसाका पाठ पढाउँदै थिए ।
केही वर्ष पहिला एउटा हिन्दी चलचित्र आएको थियो, ‘मुन्नाभाइ एमबीबीएस’ । त्यसको एउटा संवाद युवा पुस्तामाझ असाध्यै लोकप्रिय भएको थियो, ‘बापु ने पहले गाल पर थप्पड परने पर दुसरा गाल बढाने की नसिहत दी, लेकिन दुसरे गाल पर थप्पड परने पर क्या करें ये नहीं बताया ।’ चलचित्रमा फेरि मुन्नाभाइ पात्रको असली चरित्र मुखरित हुन्छ र उसले आफ्नो विरोधीलाई चुट्छ । यस्ता मुन्नाभाइ तपाई, हाम्रामाझ पनि मौजुद छन्, जसले गान्धीको आदर्शलाई अधुरो बुझेका छन् र गान्धीवादी हुने दम्भमात्र राख्छन् । गान्धीको सहिष्णुताबारे वर्तमान पिढीलाई बताउनुपर्छ । आफ्नो समाज र देशलाई बदल्नुछ भने अहिंसक प्रतिरोधको ताकत हासिल गर्नुपर्छ । गान्धीले भनेका थिए, ‘यदि तपाईं कसैलाई सुधार्न चाहनुहुन्छ भने वा आफ्नै आत्मालाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने क्षमा गर्न सिक्नुस् ।’ क्षमा गर्ने प्रवृत्ति नै सहिष्णु बन्नुको प्रारम्भिक आधार हो । गान्धी कहिल्यै पनि हिंसाको जवाफ हिंसाले दिने पक्षमा थिएनन् । उनले व्यक्तिगत हमलाको जवाफ संयमसाथ दिए । गान्धीको सहिष्णुता मजबुरी होइन । मजबुरीको नाम महात्मा गान्धी होइन । आफ्नो सहिष्णुताको बलबाट मजबुरीलाई मजबुतीमा बदलिदिने व्यक्तिको नाम हो– गान्धी । त्यसैले गान्धीको सत्ता अहिंसक साहसीहरूको सत्ता हो । भयमुक्त योद्धाहरूको सत्ता हो ।
सङ्घर्षका क्रममा गान्धी धेरैपटक जेल परे । जेलमा पनि उनी शौचालय सफाइ, पढाइ, लेखाइ, प्रवचन, चर्खा काट्ने र छालाको जुत्ता–चप्पल बनाउने काम गर्थे । उनलाई दक्षिण अफ्रिका छँदा जेल पठाउने अधिकारी जनरल स्मट्स थिए । सन् १९१३ मा गान्धीले यी अधिकारीलाई जेलबाटै चिठी लेखेर आफूले १५ वटा चप्पल बनाइसकेको बताएका थिए । यदि ती अधिकारीले आफ्नो खुट्टाको नापो दिए भने तिनका लागि पनि चप्पल बनाइदिने बताएका थिए । सन् १९१४ मा जब उनी जेलबाट रिहा भए र दक्षिण अफ्रिका सधैंका लागि छाड्ने सोच बनाए, त्यतिखेर गान्धीले ती अधिकारीलाई आफूले बनाएको चप्पल दिए । पछि भारत आएर गान्धी यहाँका अग्ला नेता भए । उनको राजनीतिक र सामाजिक सक्रियता बढ्दै गयो । तर पनि उनले उद्यम छाडेनन् । चप्पल बनाउनुका साथै मरेका जनावरहरूको छाला निकाल्ने काम पनि सिके ।
एक पटक जवाहरलाल नेहरू र सरदार बल्लवभाइ पटेलका साथ भारतीय कांग्रेसका केही ठूला नेताहरू महाराष्ट्रस्थित सेवाग्राम आश्रम पुगे । उनीहरूले निकै बेर गान्धीलाई कुर्नुपर्‍यो । गान्धीसँग भेट्दा सिकायत पनि गरे । गान्धीले त्यतिखेर आफू आश्रमबासीलाई छालाको चप्पल बनाउन सिकाइरहेको बताउँदै उनीहरूलाई पनि चप्पल बनाउन सुझाए । गान्धी आफ्नो काम आफैंले गर्नुपर्ने सोचका पक्षपाती थिए । उनका विरोधी द. अफ्रिकाका स्मट्सले सन् १९३९ मा लेखे, ‘मैले यो चप्पललाई कैयौंपटक लगाएँ, मलाई लाग्छ, यस्तो महान व्यक्तिको हातले बनाएको चप्पल खुट्टामा लगाउनका लागि म अयोग्य छु ।’ अहिले त्यो चप्पलको जोडी एउटा संग्रहालयमा राखिएको छ । यसरी गान्धी आफ्नो संयम र सिर्जनाले आफूभन्दा फरक विचार राख्नेको पनि मन जित्थे । तमाम असहमतिका बावजुद पनि कसैसँगको निजी सम्बन्धलाई आत्मीय कायम राख्न उनी तत्पर रहन्थे । कसैले व्यक्तिगत मानहानि गर्दा पनि त्यसलाई सहन्थे, जसरी दक्षिण अफ्रिकामा ट्रेनबाट धक्का दिएर खसाल्दा त्यसको तत्काल प्रतिरोध गर्नुभन्दा पनि मन्थन गरेर त्यो प्रवृत्ति विरुद्ध नै लड्ने काम गरे । दक्षिण अफ्रिकाको धर्तीमा भएको अपमानदेखि आफ्नै मुलुक भारतमा भएको हिंसाको प्रचण्ड रापतापमाझ पनि देखिन्छ, एउटा सहिष्णु गान्धी जो आफ्नो प्रतिज्ञाप्रति प्रतिबद्ध छ र त्यसका लागि आहुति पनि दिन्छ ।
स्वयं उनकै भारतभित्रबाट ‘वाट्सप विश्वविद्यालय’द्वारा फैलाइएको गान्धी विरोधी कुतर्क, भ्रामक तथ्य र त्यससँग जोडिएको पक्षधरताका बावजुद पनि गान्धी झन्–झन् विकल्पका रूपमा देखिन थालेका छन् । २००७ जून १५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गर्‍यो— गान्धीको जन्मदिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसको रूपमा मनाइने । यो प्रस्ताव सबैभन्दा पहिला नोबल पुरस्कार विजेता इरानका शिरिन इबाडीले २००४ मा राखेका थिए । अहिले गान्धीको १५० औं जयन्ती मनाइराख्दा हामीले पनि त्यसमा साझेदारी गर्दै पर्यावरणमैत्री नेपालको सङ्कल्प राख्न सक्यौं भने त्यो गान्धी स्मृति मनाएको सार्थक हुनेछ । विकासको बाटोलाई विनाशको पर्यायवाची नबनाउन गान्धीको संकल्पलाई अवसरमा अनुवाद गर्न सक्छ । हामीले देखिराखेका छौं, विनाशमुखी विकासको परिणामले कत्रो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ ।
बदलावका लागि अहिंसक माध्यमको प्रयोग अर्को संकल्प हो । हिंसा एउटा मनोवैज्ञानिक अवस्था हो । यसले अर्को पक्षप्रति निषेध, घृणा र संवादहीनताका लागि उक्साउँछ । बदलावका लागि बन्दुक बोकेको बताउनेहरू पनि हिजोआज यसले जन्माएका विकृतिबाट दिक्दार छन् । आखिर यसको भुक्तभोगी बन्दुक उठाउने समाज नै हुन्छ । चे ग्वेरा वा फिडेल कास्त्रोले क्रान्तिका लागि आफ्नो आधार क्षेत्रका जनतालाई बन्दुक समाउन लगाए, तर जब सत्तामा पुगे ती बन्दुकहरू कसरी फिर्ता ल्याउने चिन्ता छायो । भनिन्छ– समाज, बन्दुक र राज्य एकसाथ चल्न सक्दैन । अन्ततोगत्वा कास्त्रोले जनताबाट बन्दुक फिर्ता लिए । बन्दुकको बलमा राज्यलाई आफ्नो कुरा सुनवाइ गराउने चाहनालाई कदापि स्वीकार गर्न सकिंदैन । ठीक त्यसैगरी बन्दुकको बलमा सरकारले जनविरोधी नीति वा काम थोपर्न खोज्छ भने त्यो पनि अस्वीकार गरिन्छ । शान्तिपूर्ण सङ्घर्षलाई सरकारले संवादमार्फत वैधता दिनुपर्छ । आज नेपालमा यस्तो नागरिक समझदारीको आवश्यकता छ, जहाँ सत्याग्रह र अहिंसाबाट नै जनआकांक्षालाई राज्यले सुन्छ । यसले नै प्रत्येक नेपालीको मनमा गान्धीको सत्तालाई स्थापित गर्न सक्छ ।
प्रकाशित : आश्विन १६, २०७६ ०९:२२